I-Q & A ezungeze i-COVID-19 ngezilimi zesifunda zase-Afrika - i-AfricArXiv
Kushicilelwe ngu Iqembu le -AfricaArXiv on I-25th Ngo-Mashi 2020 I-25th Ngo-Mashi 2020
Ukusatshalaliswa kolwazi mayelana nezindlela ezinhle kakhulu nokusikisela kokuziphatha ukunciphisa ukusabalala kwe-coronavirus kunikezwa kakhulu ngesiNgisi. Cishe zingama-2000 izilimi zakuleli ezikhulunywa e-Afrika futhi abantu banelungelo lokwaziswa ngolimi lwabo ngalokho okwenzekayo nokuthi bangazivikela kanjani, imindeni yabo, abangane kanye nozakwabo.
Ngabe ubonile ukuthi ungashintsha ulimi lwewebhusayithi yethu? Njengamanje, sinikeza okuqukethwe kwethu ngezilimi ezilandelayo:
Ngicela uqaphele: Iwebhusayithi ye -AfricaArXiv ihunyushwe ngokuzenzakalela yi I-GTranslate.io nge-plugin ye-wp isuka esiNgisini iye ezilimini eziyi-19. Ukuhumusha kuhle kepha akuphelele. Ungasisiza ukuthuthukisa imibhalo ehunyushiwe kuwebhusayithi yethu? Sicela uthumele i-imeyili ku kenya@africarxiv.org. | Umhlahlandlela: github.com/AfricArxiv/.../translations.md
Funda kabanzi mayelana nokwehluka kwezilimi ekukhulumeni kwezilimi zase-Afrika africarxiv.org/l lulimi.
Sicela uthole ngezansi imininingwane enikezwe i Ihhovisi lesifunda le-WHO lesifunda i-Afrika // okutholakale ngoMashi 25, 2020:
I-WHO Q&A kuma-coronaviruses (i-COVID-19)
Amazwe ase-Afrika asuka ekufundeni kwe-COVID-19 ayophendulwa njengoba amacala amaningi eqinisekisa amacala
Umphakathi wembulunga yonke ugijimela ukwehlisa ijubane futhi ekugcineni umise ukusakazeka kwe-COVID-19, ubhubhane olubulale izinkulungwane zabantu futhi lwagula amashumi ezinkulungwane zabanye. E-Afrika, leli gciwane lisabalale emazweni amaningi kungakapheli amasonto. Ohulumeni neziphathimandla zezempilo kulo lonke izwekazi balwela ukunciphisa ukunqekeka kwezifo ezisakazekile.
Kusukela kuqale udlame i-World Health Organisation (WHO) bebelokhu bexhasa ohulumeni base-Afrika ngokutholwa kusenesikhathi ngokunikeza izinkulungwane zezindawo zokuhlola i-COVID-19 emazweni, ukuqeqesha inqwaba yabasebenzi bezempilo kanye nokuqinisa ukubhekwa kwemiphakathi. Amazwe angamashumi amane nesikhombisa esifundeni se-WHO sase-Afrika manje angahlolela i-COVID-19. Ekuqaleni kokuqubuka kwaba babili kuphela abangakwenza lokho.
I-WHO ikhiphe umhlahlandlela emazweni, ovuselelwa njalo ukuthi unake isimo esiphendukayo. Imihlahlandlela ifaka izinyathelo ezifana nokuhlukaniswa, ukubuyiselwa kwezakhamizi nokulungela ukusebenza ezindaweni zokusebenza. Le Nhlangano futhi isebenza nenethiwekhi yabachwepheshe ukuze kuhlanganiswe imizamo yokubhekwa kwezifunda, isifo sokuqothuka, imodeli, ukubonwa kwezifo, ukunakekelwa kwemitholampilo nokwelashwa, nezinye izindlela zokubona, ukuphatha lesi sifo kanye nokubeka umkhawulo ekusakazweni kwabantu ngokubanzi.
I-WHO ihlinzeka ngokusekelwa okukude namazwe athintekile ekusebenziseni amathuluzi edatha ye-elekthronikhi, ukuze iziphathimandla zezempilo zikazwelonke zikuqonde kangcono ukuqubuka kwamazwe abo. Ukulungiselela nokuphendula kusifo esiwumshayabhuqe sangaphambilini kunikeza isisekelo esiqinile samazwe amaningi ase-Afrika ukulwa nokusabalala kwe-COVID-19.
Ngokubalulekile, izindlela zokuvikela eziyisisekelo ezenziwa ngabantu nemiphakathi zihlala zisetshenziswa elinamandla kakhulu ukuvimbela ukwanda kwe-COVID-19. I-WHO isiza abaphathi bendawo ukwenza imisebenzi yomsakazo nezindawo ze-TV ukwazisa umphakathi ngobungozi be-COVID-19 nokuthi yiziphi izindlela okufanele zithathwe. Le Nhlangano futhi iyasiza ukulwa ne-disinformation futhi iqondisa amazwe ekusetshenzisweni kwezikhungo zokushayela izingcingo ukuqinisekisa ukuthi umphakathi uyaziswa.
I-Q & A kuma-coronaviruses (i-COVID-19)
>> Who.int/news-room/qa-detail/qa-coronaviruses // 9 Mashi 2020 | I-Q & A.
I-WHO iqhubeka nokuqapha nokuphendula kulokhu kubheduka. Le Q&A izobuyekezwa njengoba kwaziwa kakhulu nge-COVID-19, ukuthi isabalala kanjani nokuthi ibathinta kanjani abantu emhlabeni jikelele. Ngeminye imininingwane, hlola futhi njalo Amakhasi we-WHO e-coronavirus.
AmaCoronavirus awumndeni omkhulu wamagciwane angadala ukugula ezilwaneni noma kubantu. Kubantu, ama-coronavirus amaningana aziwa ngokudala izifo zokuphefumula kusukela emakhazeni okuvamile kuya ezifweni ezinzima kakhulu njenge-Middle East Respiratory Syndrome (MERS) kanye ne-Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). I-coronavirus esanda kutholwa ibangela isifo se-coronavirus i-COVID-19.
I-COVID-19 yisifo esithathelanayo esidalwa yi-coronavirus esanda kutholakala. Leli gciwane elisha nesifo belingaziwa ngaphambi kokuqala kokugqashuka kwabantu eWuhan, eChina, ngoDisemba ka-2019.
Yiziphi izimpawu ze-COVID-19?
Izimpawu ezivame kakhulu ze-COVID-19 umkhuhlane, ukukhathala, nokukhwehlela okomile. Ezinye iziguli zingase zibe nezinhlungu nezinhlungu, ukuminyana emakhaleni, ikhala eligijimayo, umphimbo obuhlungu noma isifo sohudo. Lezi zimpawu ngokuvamile ziba mnene futhi ziqala kancane kancane. Abanye abantu bayatheleleka kodwa bangabi nazimpawu futhi bazizwe bengaphilile. Abantu abaningi (cishe ama-80%) bayalulama kulesi sifo ngaphandle kokudinga ukwelashwa okukhethekile. Cishe umuntu oyedwa kwabayisithupha abathola i-COVID-1 ugula kakhulu futhi uba nobunzima bokuphefumula. Abantu asebekhulile, kanye nalabo abanezinkinga zempilo eziyisisekelo njengomfutho wegazi ophakeme, izinkinga zenhliziyo noma isifo sikashukela, maningi amathuba okuba babe nokugula okubi kakhulu. Abantu abanomkhuhlane, ukukhwehlela kanye nobunzima bokuphefumula kufanele bafune usizo lwezempilo.
Ngabe i-COVID-19 isakazeka kanjani?
Abantu bangabamba i-COVID-19 kwabanye abanalo leli gciwane. Lesi sifo singasakazeka sisuka komunye umuntu sisiya ngamaconsi amancane asuka ekhaleni noma emlonyeni asakazeka lapho umuntu ekhwehlela noma eqeda i-COVID-19. La maconsi awela ezintweni nasezindongeni zomuntu. Abanye abantu babe sebebamba i-COVID-19 ngokuthinta lezi zinto noma izingaphezulu, bese bethinta amehlo abo, ikhala noma umlomo. Abantu bangaphinde babambe i-COVID-19 uma baphefumula ngamaconsi omuntu ovela ku-COVID-19 okhalayo noma okhipha amaconsi. Ngalesi sizathu kubalulekile ukuthi uhlale kude nemitha elilodwa (amamitha amathathu) kude nomuntu ogulayo.
I-WHO ihlola ucwaningo oluqhubekayo ngezindlela i-COVID-19 ezisakazeka ngayo futhi izoqhubeka nokwabelana ngokutholakele okubuyekeziwe.
Ingabe igciwane elibangela i-COVID-19 lingasakazwa ngomoya?
Ucwaningo kuze kube manje luphakamisa ukuthi igciwane elibangela i-COVID-19 lisakazwa kakhulu ngokuthintana namaconsi okuphefumula esikhundleni somoya. Bona impendulo yangaphambilini kokuthi “Isabalala kanjani i-COVID-19?”
Ingabe i-COVID-19 ingabanjwa kumuntu ongenazo izimpawu?
Indlela eyinhloko lesi sifo esisakazeka ngayo ngamaconsi okuphefumula axoshwa ngumuntu okhwehlelayo. Ingozi yokuthola i-COVID-19 kumuntu ongenazo nhlobo izimpawu iphansi kakhulu. Kodwa-ke, abantu abaningi abane-COVID-19 baba nezimpawu ezithambile kuphela. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ezigabeni zokuqala zesifo. Ngakho-ke kuyenzeka ukuthi ubambe i-COVID-19 kumuntu, ngokwesibonelo, okhwehlela nje kancane futhi ongazizwa egula. I-WHO ihlola ucwaningo oluqhubekayo ngesikhathi sokudluliselwa kwe-COVID-19 futhi izoqhubeka nokwabelana ngemiphumela ebuyekeziwe.
Ngingakwazi yini ukubamba i-COVID-19 endle yomuntu onalesi sifo?
Ingozi yokuthola i-COVID-19 endle yomuntu onaleli gciwane ibonakala iphansi. Nakuba uphenyo lokuqala lubonisa ukuthi igciwane lingase libe khona endle kwezinye izimo, ukusabalala kwalo mzila akuyona into eyinhloko yokuqubuka kwalesi sifo. I-WHO ihlola ucwaningo oluqhubekayo ngezindlela i-COVID-19 esakazwa ngayo futhi izoqhubeka nokwabelana ngokutholakele okusha. Ngenxa yokuthi lokhu kuyingozi, noma kunjalo, kungesinye isizathu sokuhlanza izandla njalo, ngemva kokusebenzisa indlu yokugezela nangaphambi kokudla.
Ubani osengcupheni yokuthola ukugula okunzima?
Ngenkathi sisafunda ngokuthi i-COVID-2019 ibathinta kanjani abantu, abantu abadala kanye nabantu abanezimo zezokwelapha ezivele zikhona (ezifana nomfutho wegazi ophakeme, isifo senhliziyo, isifo samaphaphu, umdlavuza noma isifo sikashukela) babonakala begula kakhulu kunabanye.
Ingabe ama-antibiotic ayasebenza ekuvimbeleni noma ekwelapheni i-COVID-19?
Cha. Ama-antibiotics awasebenzi ngokumelene namagciwane, asebenza kuphela ezifweni ezibangelwa amagciwane. I-COVID-19 ibangelwa igciwane, ngakho ama-antibiotics awasebenzi. Ama-antibiotic akufanele asetshenziswe njengendlela yokuvimbela noma yokwelapha i-COVID-19. Kufanele zisetshenziswe kuphela njengoba kuqondiswe udokotela ukwelapha ukutheleleka kwamagciwane.
Ingabe i-COVID-19 iyafana ne-SARS?
Cha. Igciwane elidala i-COVID-19 kanye nalelo elabangela ukugqashuka kwe-Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) ngo-2003 lihlobene ngokofuzo, kodwa izifo ezizibangelayo zihluke kakhulu.
I-SARS ibibulala kakhulu kepha inegciwane elincane kune-COVID-19. Akukaze kube nokuqubuka kwe-SARS noma kuphi emhlabeni kusukela ngo-2003.
Yini engingayenza ukuze ngizivikele futhi ngivimbele ukusakazeka kwezifo?
Izinyathelo zokuvikela zawo wonke umuntu
Hlala unolwazi ngolwazi lwakamuva mayelana nokugqashuka kwe-COVID-19, olutholakala kuwebhusayithi ye-WHO kanye neziphathimandla zezempilo zomphakathi zendawo yakho. Amazwe amaningi emhlabeni jikelele abone amacala e-COVID-19 futhi amaningana abonile ukuqubuka. Iziphathimandla eChina nakwamanye amazwe ziphumelele ukwehlisa noma ukumisa ukuqubuka kwazo. Nokho, isimo asibikezeleki ngakho hlola njalo ukuze uthole izindaba zakamuva.
Unganciphisa amathuba akho okutheleleka noma ukusabalalisa i-COVID-19 ngokuthatha izinyathelo zokuphepha ezilula:
Hlanza izandla zakho njalo nangokucophelela ngokuzihlikihla ngesandla okunotshwala noma uzigeze ngensipho namanzi.
Kungani? Ukugeza izandla ngensipho namanzi noma ukusebenzisa isihlikihla sesandla esinotshwala kubulala amagciwane okungenzeka asezandleni zakho.
Gcina okungenani amamitha ayi-1 (amamitha ama-3) phakathi kwakho nanoma ngubani okhehlelayo noma othimulayo.
Kungani? Uma umuntu ekhwehlela noma ethimula ufafaza amaconsi amancane awuketshezi aphuma emakhaleni noma emlonyeni okungenzeka ukuthi anegciwane. Uma useduze kakhulu, ungaphefumula amaconsi, okuhlanganisa negciwane le-COVID-19 uma umuntu okhwehlelayo enalesi sifo.
Kungani? Izandla zithinta izindawo eziningi futhi zingacosha amagciwane. Uma sezingcolisiwe, izandla zingadlulisela igciwane emehlweni akho, ekhaleni noma emlonyeni. Ukusuka lapho, igciwane lingangena emzimbeni wakho futhi lingakwenza ugule.
Qiniseka ukuthi wena nabantu abasondele kuwe, balandela inhlanzeko yokuphefumula enhle. Lokhu kusho ukumboza umlomo nekhala nge-elle noma ngethishu lakho eligobile uma ukhwehlela noma uthimula. Bese ulahla izicubu ezisetshenzisiwe ngokushesha.
Kungani? Amaconsi asakaza igciwane. Ngokulandela inhlanzeko yokuphefumula enhle uvikela abantu abaseduze kwakho kumagciwane anjengomkhuhlane, umkhuhlane kanye ne-COVID-19.
Hlala ekhaya uma uzizwa ungathandeki. Uma unomkhuhlane, ukukhwehlela nobunzima bokuphefumula, funa usizo lwezokwelapha futhi ushaye ucingo kusenesikhathi. Landela izinkomba zeziphathimandla zempilo yangakini.
Kungani? Iziphathimandla zikazwelonke nezendawo zizoba nolwazi lwakamuva kakhulu mayelana nesimo endaweni yangakini. Ukushaya kusengaphambili kuzovumela umhlinzeki wakho wokunakekelwa kwezempilo ukuthi akuqondise ngokushesha esikhungweni sezempilo esifanele. Lokhu futhi kuzokuvikela futhi kusize ekuvimbeleni ukusabalala kwamagciwane nezinye izifo.
Hlala unolwazi lwakamuva ngezindawo ezishisayo ze-COVID-19 (amadolobha noma izindawo zasendaweni lapho i-COVID-19 isabalala khona kabanzi). Uma kungenzeka, gwema ukuya ezindaweni - ikakhulukazi uma ungumuntu omdala noma unesifo sikashukela, inhliziyo noma amaphaphu.
Kungani? Unethuba eliphezulu lokuthola i-COVID-19 kwenye yalezi zindawo.
Izinyathelo zokuvikela zabantu abasezindaweni noma abasanda kuzivakashela (ezinsukwini eziyi-14 ezidlule) lapho i-COVID-19 ibhebhetheka khona
Landela isiqondiso esichazwe ngenhla (Izinyathelo zokuvikela wonke umuntu)
Zihlukanise ngokuhlala ekhaya uma uqala ukuzizwa ungaphilile, noma unezimpawu ezithambile ezifana nekhanda elibuhlungu, imfiva esezingeni eliphansi (37.3 C noma ngaphezulu) kanye nekhala eligijima kancane, uze ululame. Uma kubalulekile kuwena ukuthi kube nomuntu okuphathele izinsiza noma uphume, isb ukuyothenga ukudla, bese ugqoka imaski ukuze ugweme ukuthelela abanye abantu.
Kungani? Ukugwema ukuthintana nabanye nokuvakashela izikhungo zezokwelapha kuzovumela lezi zikhungo ukuthi zisebenze ngempumelelo futhi kusize ukuvikela wena nabanye kumagciwane angaba khona e-COVID-19 namanye.
Uma uba nomkhuhlane, ukhwehlela kanye nobunzima bokuphefumula, funa iseluleko sezokwelapha ngokushesha ngoba lokhu kungase kube ngenxa yezifo zokuphefumula noma esinye isimo esibucayi. Shayela kusengaphambili futhi utshele umhlinzeki wakho nganoma yikuphi ukuvakasha kwakamuva noma ukuxhumana nabahambi.
Kungani? Ukushaya kusengaphambili kuzovumela umhlinzeki wakho wokunakekelwa kwezempilo ukuthi akuqondise ngokushesha esikhungweni sezempilo esifanele. Lokhu kuzosiza futhi ukuvimbela ukusabalala okungenzeka kwe-COVID-19 namanye amagciwane.
Mangakanani amathuba okuthi ngithole i-COVID-19?
Ubungozi buncike ekutheni ukuphi - futhi ikakhulukazi, ukuthi ngabe kunokuqubuka kwe-COVID-19 okwenzeka lapho.
Kubantu abaningi ezindaweni eziningi ingozi yokuthola i-COVID-19 isephansi. Nokho, manje sekunezindawo emhlabeni wonke (amadolobha noma izindawo) lapho isifo sibhebhetheka khona. Kubantu abahlala kuzo, noma abavakashelayo, lezi zindawo ubungozi bokuthola i-COVID-19 buphezulu. Ohulumeni neziphathimandla zezempilo zithatha izinyathelo ezinqala ngaso sonke isikhathi lapho kukhonjwa icala elisha le-COVID-19. Qiniseka ukuthi uthobela noma yimiphi imikhawulo yendawo ekuhambeni, ukunyakaza noma imibuthano emikhulu. Ukubambisana nemizamo yokulawula izifo kuzonciphisa ingozi yokubamba noma ukusabalalisa i-COVID-19.
Ukuqubuka kwe-COVID-19 kungaqukwa futhi ukudluliswa kumiswe, njengoba kukhonjisiwe eChina nakwamanye amazwe. Ngeshwa, ukuqubuka okusha kungavela ngokushesha. Kubalulekile ukuqaphela isimo lapho ukhona noma ohlose ukuya khona. I-WHO ishicilela izibuyekezo zansuku zonke ngesimo se-COVID-19 emhlabeni jikelele.
Ungazibona lezi ku who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
Isikhathi esingakanani isikhathi sokufakwa kwe-COVID-19?
“Isikhathi sokufukamela” sisho isikhathi esiphakathi kokubamba igciwane nokuqala ukuba nezimpawu zesifo. Izilinganiso eziningi zesikhathi sokufukamela se-COVID-19 zisukela ezinsukwini ezi-1-14, ngokuvamile cishe izinsuku ezinhlanu. Lezi zilinganiso zizobuyekezwa njengoba idatha eyengeziwe itholakala.
Ngingakwazi ukubamba i-COVID-19 esilwaneni sami?
Yize kube nesigameko esisodwa sokungenwa kwenja eHong Kong, kuze kube manje, abukho ubufakazi bokuthi inja, ikati nanoma yisiphi isilwane esifuywayo singadlulisela i-COVID-19. I-COVID-19 isakazwa kakhulu ngamaconsi akhiqizwa lapho umuntu onaleli gciwane ekhwehlela, ethimula, noma ekhuluma. Ukuze uzivikele, hlanza izandla zakho njalo nangokucophelela.
I-WHO iyaqhubeka nokuqapha ucwaningo lwakamuva mayelana nalesi sihloko nezinye izihloko ze-COVID-19 futhi izobuyekeza njengoba kutholakala okusha okutholakele.
Ingabe kuphephile ukuthola iphasela elivela kunoma iyiphi indawo lapho kubikwe khona i-COVID-19?
Yebo. Amathuba omuntu onegciwane elingcolisa izimpahla zezentengiso aphansi futhi nengozi yokubamba leli gciwane ebangela i-COVID-19 kusuka kwiphakeji elihanjisiwe, elihanjelwe, futhi elivezwe ezimeni ezahlukene futhi izinga lokushisa nalo liphansi.
Ingabe kufanele ngikhathazeke nge-COVID-19?
Ukugula okubangelwa ukutheleleka nge-COVID-19 ngokuvamile kuthambile, ikakhulukazi ezinganeni nakubantu abadala. Nokho, ingabangela ukugula okubi kakhulu: cishe umuntu oyedwa kwabayi-1 oyibambayo udinga ukunakekelwa esibhedlela. Ngakho-ke kujwayelekile ukuthi abantu bakhathazeke ngokuthi ukuqubuka kwe-COVID-5 kuzobathinta kanjani bona nabathandekayo babo.
Singadlulisela ukukhathazeka kwethu ezenzweni ukuze sizivikele thina, esibathandayo kanye nemiphakathi yethu. Okokuqala nokubaluleke kakhulu phakathi kwalezi zenzo ukugeza izandla njalo nangokucophelela kanye nokuhlanzeka okuhle kokuphefumula. Okwesibili, hlala unolwazi futhi ulandele izeluleko zeziphathimandla zezempilo zendawo okuhlanganisa nanoma yimiphi imingcele ebekiwe ekuhambeni, ukunyakaza kanye nemibuthano.Funda kabanzi mayelana nokuzivikela who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
Ingabe ikhona imithi noma izindlela zokwelapha ezingavimbela noma zelapha i-COVID-19?
Ngenkathi amanye amakhambi asentshonalanga, endabuko noma asekhaya angase anikeze induduzo futhi adambise izimpawu ze-COVID-19, abukho ubufakazi bokuthi umuthi wamanje ungasivikela noma welaphe lesi sifo. I-WHO ayincomi ukuzelapha nganoma yimiphi imithi, okuhlanganisa nama-antibiotic, njengendlela yokuvimbela noma yokwelapha i-COVID-19. Nokho, kukhona izinhlolo zomtholampilo ezimbalwa eziqhubekayo ezifaka yomibili imithi yasentshonalanga neyendabuko. I-WHO izoqhubeka nokuhlinzeka ngolwazi olusha ngokushesha nje lapho okutholakele emitholampilo kutholakala.
Ingabe ukhona umuthi wokugomela, umuthi noma ukwelashwa kwe-COVID-19?
Hhayi okwamanje. Kuze kube manje, awukho umuthi wokugoma futhi awukho umuthi othize we-antiviral ongavimbela noma welaphe i-COVID-2019. Kodwa-ke, labo abathintekile kufanele bathole ukunakekelwa ukuze banciphise izimpawu. Abantu abagula kakhulu kufanele balaliswe esibhedlela. Iziguli eziningi ziyalulama ngenxa yokunakekelwa okusesekayo.
Imithi yokugoma engaba khona kanye nokwelashwa okuthile kwemithi kuyaphenywa. Bahlolwa ngezivivinyo zomtholampilo. I-WHO ixhumanisa imizamo yokwenza imigomo nemithi yokuvimbela nokwelapha i-COVID-19.
Izindlela eziphumelela kakhulu zokuzivikela wena nabanye ku-COVID-19 ukugeza izandla zakho njalo, ukumboza ukukhwehlela kwakho ngokugoba indololwane noma izicubu, futhi ugcine ibanga okungenani eliyimitha elilodwa (1 amafidi) ukusuka kubantu abakhwehlelayo noma abakhwehlelayo. ukuthimula. (Bheka Izinyathelo eziyisisekelo zokuvikela ngokumelene ne-coronavirus entsha).
Ingabe kufanele ngigqoke imaski ukuze ngizivikele?
Gqoka imaskhi kuphela uma ugula unezimpawu ze-COVID-19 (ikakhulukazi ukhwehlela) noma unakekela othile okungenzeka ukuthi une-COVID-19. Imaski yobuso elahlwayo ingasetshenziswa kanye kuphela. Uma ungaguli noma ungabheki umuntu ogulayo kusho ukuthi umosha isifihla-buso. Kukhona ukushoda kwamaski emhlabeni wonke, ngakho-ke i-WHO inxusa abantu ukuthi basebenzise imaski ngobuhlakani.
I-WHO yeluleka ukusetshenziswa okuphusile kwezifihla-buso ukuze kugwenywe ukumoshwa kwezinsiza ezibalulekile kanye nokusetshenziswa kabi kwezifihla-buso (bheka Iseluleko mayelana nokusetshenziswa kwezifihla-buso).
Izindlela eziphumelela kakhulu zokuzivikela wena nabanye ku-COVID-19 ukugeza izandla zakho njalo, ukumboza ukukhwehlela kwakho ngendololwane noma ngethishu futhi ugcine ibanga okungenani eliyimitha elingu-1 (amafidi amathathu) kubantu abakhwehlelayo noma abathimula. . Bheka izinyathelo eziyisisekelo zokuvikela ngokumelene ne-coronavirus entsha ukuze uthole olunye ulwazi.
Indlela yokugqoka, ukusebenzisa, ukususa nokulahla imaskhi?
Khumbula, imaskhi kufanele isetshenziswe kuphela abasebenzi bezempilo, abanakekeli, kanye nabantu abanezimpawu zokuphefumula, ezinjengomkhuhlane nokukhwehlela.
Ngaphambi kokuthi uthinte imaski, hlanza izandla ngokuhlikihla ngesandla okunotshwala noma insipho namanzi
Thatha imaski bese uyihlolela izinyembezi noma izimbobo.
I-Orient ukuthi iluphi uhlangothi olungaphezulu (lapho kukhona umugqa wensimbi).
Qinisekisa ukuthi uhlangothi olufanele lwemaski lubheke ngaphandle (uhlangothi olunombala).
Beka imaski ebusweni bakho. Ncinza umucu wensimbi noma unqenqema oluqinile lwemaski ukuze lulolonge ukuma kwekhala lakho.
Donsela phansi imaski ukuze ivale umlomo wakho nesilevu sakho.
Ngemuva kokusetshenziswa, susa imaski; susa izihibe ezinwebekayo ngemuva kwezindlebe ngenkathi ugcina imaski kude nobuso bakho nezingubo, ukugwema ukuthinta indawo engase ibe ngcolile yemaski.
Lahla imaski emgqonyeni ovaliwe ngokushesha ngemva kokusetshenziswa.
Yenza inhlanzeko yezandla ngemva kokuthinta noma ukulahla imaski - Sebenzisa ukuhlikihla ngesandla okusekelwe utshwala noma, uma kubonakala kungcolile, geza izandla zakho ngensipho namanzi.
Ingabe abantu bangangenwa yi-COVID-19 emthonjeni wezilwane?
AmaCoronavirus awumndeni omkhulu wamagciwane ajwayelekile ezilwaneni. Kwesinye isikhathi, abantu bangenwa yila magciwane angase adlulele kwabanye abantu. Isibonelo, i-SARS-CoV yayihlotshaniswa namakati e-civet kanti i-MERS-CoV isakazwa ngamakamela angama-dromedary. Imithombo yezilwane engaba khona ye-COVID-19 ayikaqinisekiswa.
Ukuze uzivikele, njengalapho uvakashela izimakethe zezilwane eziphilayo, gwema ukuthintana ngokuqondile nezilwane nezindawo lapho uxhumene nezilwane. Qinisekisa izindlela zokuphepha zokudla ezinhle ngaso sonke isikhathi. Bamba inyama eluhlaza, ubisi noma izitho zezilwane ngokucophelela ukuze ugweme ukungcoliswa kokudla okungaphekiwe futhi ugweme ukudla imikhiqizo yezilwane eluhlaza noma engaphekiwe.
Igciwane liphila isikhathi esingakanani endaweni?
Akuqiniseki ukuthi igciwane elidala i-COVID-19 liphila isikhathi esingakanani endaweni, kodwa libonakala liziphatha njengamanye ama-coronavirus. Ucwaningo luphakamisa ukuthi ama-coronavirus (kuhlanganise nolwazi lokuqala ngegciwane le-COVID-19) angase aqhubeke endaweni amahora ambalwa noma kuze kube yizinsuku ezimbalwa. Lokhu kungase kwehluke ngaphansi kwezimo ezahlukene (isb. uhlobo lwendawo, izinga lokushisa noma umswakama wendawo ezungezile).
Uma ucabanga ukuthi indawo ethile ingaba negciwane, yihlanze ngesibulali magciwane esilula ukuze ubulale igciwane futhi uzivikele wena nabanye. Hlanza izandla zakho ngokuhlikihla ngesandla okunotshwala noma uzigeze ngensipho namanzi. Gwema ukuthinta amehlo, umlomo, noma ikhala.
Ingabe kukhona okungafanele ngikwenze?
Izinyathelo ezilandelayo AZIZONA Isebenza ngokuqhathaniswa ne-COVID-2019 futhi ingaba yingozi:
Kugqokwa imaski eminingi
Ukuphuza ama-antibiotics (Bheka umbuzo 10 "Ingabe ikhona imithi yokwelapha engavimba noma yelapha i-COVID-19?")
Kunoma yikuphi, uma unomkhuhlane, ukukhwehlela nobunzima bokuphefumula funa usizo lwezempilo ngaphambi kwesikhathi ukunciphisa ingozi yokuthola ukutheleleka okuthe xaxa futhi uqiniseke ukuthi wabelana ngomlando wakho wokuvakasha wakamuva nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo.
Ngisebenzisa #AI ukuhumusha "Geza izandla zakho" ezilimini ezingaphezu kuka-500. Nakhu ukuthi ngikwenze kanjani kanye nesixhumanisi sokuhumusha: https://t.co/jkXc0ErYOc
Sibonga u @facebook ngomsebenzi wabo ku-MUSE, obekusemqoka ekufezeni lokhu!#NLProc #i-coronavirus @SILintl pic.twitter.com/3zJrvST3Jc
- UDaniel Whitenack (@dwhitena) Mashi 24, 2020
Categories:	Covid-19Ukuhluka KwezilimiVula UkufinyelelaEzokuxhumana Kwesayensi